Wararka - Kordhinta qarashka duugga ah ayaa taageeraya qiimaha birta ee Yurub
Kharashka duugga ah ee sii kordhaya ayaa taageeraya qiimaha birta ee Yurub
Qunyar socod, sicir barar ku saleysan sicir barar ayaa laga hirgeliyay soo saarayaasha rebar ee dalalka Yurubta Galbeed, bishan. Isticmaalka warshadaha dhismaha ayaa wali ah mid caafimaad ahaan cakiran. Si kastaba ha noqotee, la'aanta macaamil ganacsi ballaaran ayaa la xusay welwelna laga qabo Covid-19 ayaa jira.
Mills Jarmalka ayaa aasaasay sagxad qiimo ah
Soosaarayaasha jarmalka ee Jarmalka ayaa aasaasaya sagxad salka ku haysa € 200 halkii tan. Mills waxay ka warbixiyaan buugaagta kala dambeynta wanaagsan, iyo waqtiyada hogaaminta bixinta waa inta u dhaxeysa afar ilaa lix toddobaad. Iibsashadu waa wax yar oo hoos loo dhigay, laakiin waxqabadku waa inuu bilowdaa bilaha soo socda. Been abuureyaasha gudaha waxay la kulmayaan faa iidooyin cufan oo cufan maadaama aysan weli kor u qaadin qiimahooda iibinta.
Awoodda dhismaha Beljamka ayaa su'aal laga keenay
Biljimka dhexdiisa, qiimayaasha aasaasiga ah ayaa sii kordhaya sababo la xiriira kharashka duugga oo kordha. Iibsadayaashu waxay u egtahay inay aqbali doonaan horumar dheeraad ah, si ay u helaan waxyaabo. Si kastaba ha noqotee, dhowr processor ayaa ku guuldareysanaya inay ka tarjumaan kharashyada beddelka qiimaha iibka alaabadooda dhammaatay.
Kaqeybgaleyaasha sahayda waxay qabaan fikrado kaladuwan oo ku saabsan awooda waaxda dhismaha. Maamulayaasha wax iibsiga ayaa ka walaacsan in dalabku dhici karo dhamaadka sanadka haddii aan la sii deynin mashaariic cusub.
Rajooyinka maalgashiga dowladda ee Talyaaniga
Soo-saareyaasha Talyaaniga ayaa soo rogay qiimo yar oo hormaris ah bishii Sebtember. Dib-u-celin yar oo ka timid qaybta dhismaha gudaha ayaa la xusay. Rajo ayaa jirta in maalgashiga dowladdu uu kobcin doono qaybtaas, muddada gaaban. Si kastaba ha noqotee, iibsadayaashu waxay sii wadaan inay wax iibsadaan si taxaddar leh. Dhibaatooyinka dhaqaale ayaa sii jiraya inta lagu gudajiray fiditaanka Covid-19.
Ganacsatada duugga ah ee Talyaanigu waxay awoodeen inay kor u qaadaan qiimahooda iibinta, bishaan, oo ay kiciyeen isbeddelka caalamiga ah ee sii kordhaya. Si kastaba ha noqotee, barnaamijyada iibinta qashinka ee milkiilayaasha maxalliga ah way xadidan yihiin.
Dayactirka Mill wuxuu yareeyaa wax soo saarka Isbaanishka
Qiimaha aasaaska rebar Isbaanishku wuu xasillay bishan. Wax soo saarka ayaa yaraaday sababo la xiriira barnaamijyada dayactirka mashiinka, laakiin maqnaanshaha ganacsi mug weyn ayaa la xusay. Iibsadayaashu waxay sugayaan inay ka helaan xigashooyinkii hore ee Gallardo Balboa rebar mill, oo ku yaal Getafe, oo ay dhowaan la wareegeen kooxda Cristian Lay.
Waxqabadka qaybta dhismaha aad ayuu usocdaa. Xaaladaha warshadaha intiisa kale way istaageen, taas oo ay ugu wacan tahay dib u dhaca mashaariicda iyo go'aan la'aanta ka jirta cudurka faafa ee coronavirus.
Tct Wareegga Mashiinka Loogu Talagalay Birta, Tct Wareegga Wareegga Sawirka, Hss M35 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Hss M2 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Qalabka Shaqada kulul ee Birta Lagu Dhejiyo, Mashiinka Mashiinka Wareegga Wareega ah,